အိမ်ပြန်မရောက်…ပက်လက်မျောတဲ့…အရုဏ်ချိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အိမ်ပြန်မရောက်…ပက်လက်မျောတဲ့…အရုဏ်ချိန်	3
Posted by အောင် မိုးသူ on Aug 12, 2015 in Creative Writing, Poetry |3comments
အချက်ပေးသံမပြဘဲ ပေါက်ကွဲတဲ့အသံ မကြားနိုင်တဲ့ ငါတို့ရဲ့အနီးဆုံးတစ်နေရာက…..
အိမ်အပြန်ကို မေမေစောင့်နေရောပေါ့ ညတွေတိုင်း.(ညတိုင်းညတိုင်း)မှာ
ဟိုးအဝေးမှာတရွေ့ရွှေ့နဲ့ လာနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေ သူတို့တွေအခုထိ(ခုချိန်ထိ)အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူး။
တွေးရင်း(ငေးရင်း)….တွေးရင်း(ငေးရင်း) သက်ပြင်းအကြိမ်ကြိမ်ချမိတယ် မေမေ….
မေမေ……ကျန်းမာပါစေ အမြဲတမ်းဆုတောင်းအသံ ကောင်းကင်ထက်မှာလွင့်ပျံလို့
ယိုင်နဲ့နဲ့ ထိမ်းရင်းကျောင်းရင်း မြို့ပျက်ထဲမှာဖက်တွယ်နေတဲ့ သူဖုန်းစားတစ်ယောက်လို
အမှောင်ကြားက အလင်းစက်ကိုရှာဆဲပဲ မေမေ……..။
အို….မေမေရယ်…. အားလုံးဟာ…သားတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ရှာခဲ့တဲ့ မြောင်းထဲကဖန်ဂေါ်လီလိုပါပဲ
ရှိမလားလို့ မြောင်းထဲကိုဟိုစမ်းဒီစမ်းပေါ့ နောက်ဆုံးတော့ မြောင်းပုပ်နံ့က လက်ထဲကိုပဲစွဲကပ်လာတယ်
ဒီလိုနဲ့ ……… ဒီလိုနဲ့ (ဒီလိုနဲ့…………….ပဲ)
နေမထွက်လာတဲ့ အရုဏ်တက်ချိန်မှာ…..အမှောင်ထဲကနေ အမှောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ် မေမေ……။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နေ့တွေဟာလည်း မှောင်နေတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: .ဂျေမီ အသံနဲ့ … ရက်ပ သီချင်းတစ်ပုဒ်လိုသာ… ဆိုသွားမိပါတော့တယ်ကွယ်…
aye.kk says: မောဟတွေလွှမ်းနေတဲ့၊